Momba ny JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD | JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD
JIANGSU TISCO INDUSTRIAL CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 2008, matihanina amin'ny famokarana coil vy tsy misy fangarony, takelaka vy tsy misy fangarony, fantsom-by vy, barany vy tsy misy fangarony , mombamomba ny vy sy ny vokatra vita amin'ny firaka. Tao anatin'ny 12 taona lasa, Indostria TISCO dia nametraka fiaraha-miasa stratejika amin'ireo orinasa marobe fanta-daza sy riaka toy ny: MASTEEL, BAOSTEEL, TISCO, ZPSS, RIZHAO, JIGANG, SHOUGANG GROUP, SSAB, JISCO. Izahay koa dia mifampiraharaha amin'ny vokatra firaka sy vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangaron'ny marika lehibe toy izaoInconel series, Monel Series, Hastelloy Series, Titanium sy ny sisa.
Taorian'ny fandrosoana haingana 12 taona, TISCO Industrial dia lasa orinasam-panompoana vy maoderina maoderina amin'ny fanodinana, varotra ary serivisy teknika amin'ny sehatry ny vokatra vy tsy misy fangarony. Tisco Industrial dia manana ny fitaovana fanodinana vy voalohany izay manome sehatra fanodinana matihanina:fanapahana, fikolokoloana, famolavolana, fantsom-panafody, fitsaboana hafanana, fametahana milina ary famafazana. Ankoatr'izay, ny indostrian'ny Tisco dia manana ivon-toeram-pitsapana maoderina sy simika ihany koa hiantohana ireo vokatra mendrika.
Jiangsu TISCO Industrial dia nanangana ivon-toerana fanodinana 10 any Wuxi, Wuhan, Hangzhou, Tianjin, Taiyuan, Zibo, Jingjiang, Tai'an, Jinan ary Jiaxing any Sina. Amin'izao fotoana izao, ny Tisco Industry dia mandrakotra faritra 150.000㎡ary manana 1.300 mpiasa. Tisco dia tapa-kevitra ny ho tonga "fanodinana vy sy ivon'ny famokarana indostrian'ny famokarana"sy"supermarket misy rojom-by"any Shina. Taorian'ny fanavaozana sy fikatsahana ny fahamboniana dia manana mpamatsy malaza eran-tany ny Tisco Industry, miaraka amin'i 100 000 taonina vy tsy misy fangarony amin'ny tahiry isan-taona.
Ny asa aman-draharahantsika dia mivelatra noho ny fivoarana mitohy ao anatin'izay taona maro izay, ary ankehitriny manangana orinasa vaovao antsoina hoe Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd. Jiangsu Join Industrial Co., Ltd dia sampan'ny Jiangsu TISCO Industrial Co., Ltd.